ရုပ်ရှင်လောက | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ရုပ်ရှင်လောက
Posted by thihayarzar on Jun 25, 2011 in Arts & Humanities | 16 comments
နိုင်ငံတကာမှာ တိုးတက်နေသော ရုပ်ရှင်လောကကြီးဟာ အရမ်းကိုအတုယူဖွယ်ကောင်းလောက်ပါတယ် … နိုင်ငံတိုင်းက မိမိနိုင်ငံရဲ့ ရုပ်ရှင်လောကကြီးတိုးတက်အောင် စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်နေကြတာကိုသိရပါတယ် …. နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ရာဇ၀င်သမိုင်းတွေကို ရုပ်ရှင်များဖြင့် တခမ်းတနားဖော်ပြကြလေ့ရှိပါတယ် … ပိုက်ဆံထက် မိမိနာမည်ကို ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် နာမည်ကြီးအောင် အသက်စွန့် ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး အချိန်တွေအများကြီးနဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ် … ကျွန်တော်တို့နေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာတော့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မယှဉ်ပြိုင်သင့်တာတွေကို ယှဉ်ပြိုင်နေသောကြောင့် မတိုးတက်ဘဲ ကျရှုံးနေတာပါ…. ဒါရိုက်တာတွေက ဇာတ်ကားတစ်ကားကို အချိန်နည်းနည်း လူနည်းနည်း ငွေနည်းနည်း နဲ့ မြန်မြန်ရုံတင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်နေကြပါတယ် … ရုပ်ရှင်လောကကြီးကို မှီခိုပြီးအသက်ဆက်နေကြသော လူတော်တော်များများမှာ ကူလီ၊တောင်သူ၊လက်လုပ်လက်စားတို့တက်တောင် အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ် …. လူနည်းနည်းနဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သွားတော့ ထုက်လုပ်သူလည်း ပိုက်ဆံပိုရတာပေါ့ … ထုက်လုပ်သူ မင်းသား မင်းသမီး တွေသာပိုက်ဆံတွေပိုက်သွားကြတယ် ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ အသက်ဆက်ရုံလောက် ထမင်းဖိုးရပဲလိုက်တယ် … ထိုကြောင့် တော်ရုံတန်ရုံ သင့်တော်ရုံလေးတွေပဲ လုပ်ကြတော့ မတိုးတက်တော့ဘူးပေါ့ … ပိုပြီးတော့ အားကြိုးမာန်တက် မပြုလုပ်ကြတော့ဘူး .. ဇာတ်ကားတစ်ကားကိုကြည့်လိုက်ရင် နောက်ထပ်တစ်ကားက ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားတွေကြောင့် ကြည့်ချင်သူမရှိလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မူနည်းပါးလှပါတယ် ..
အရည်အချင်းမလိုပါဘူး အရင်းအနှီးပဲလိုပါတယ် ဆိုတော့ မြန်မာရုပ်ရှင်လောကကြီးဟာ ဘယ်တော့များမှတိုးတက်မှာလဲ …. မင်းသားမခံရသော မသေသော မီးမထွက်သောသေနတ်များ လေပေါ်ပျံရင် ကြိုးတန်းလန်း မြင်နေရသော ဇာတ်ကားတစ်ကားကို လူ(10)လောက်နှင့်ဖြစ်အောင်ရိုက်ကြသော ဒါရိုက်တာများ ပိုက်ဆံနည်းနည်းပဲထုက်ပြီး များများလိုချင်ကြသော ထုက်လုပ်သူများ ၊ မင်းသမီးတွေကတော့ သရုပ်ဆောင်ဖို့ထက် အ၀တ်အစားဘက်မှာပိုပြီး တော့ တိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ် လုပ်တာကမရတော့ ရတာကိုပဲလုပ်ကြရပါတယ် … ပြောချင်တာတွေကတော့အများကြီးပဲဗျာ ပြောလို့လည်းပြီးတော့မှာ မဟုတ်လို့ ဒီလောက်ပဲ ပြောတော့မယ် နောက်မှထပ်ပြောမယ် …. သီဟတင်စိုးကတော့ တော်လှန်ရေးကြီးပြီးဆုံးသွားပါပြီလို့ ထင်ပါတယ် …
သီဟတင်စိုးဆိုတာ ရုပ်ရှင်မင်းသား ဟုတ်ဖူးလား။ ဘယ့်နှယ် သူထင်တာနဲ့ ပြီးသွားတာလဲ၊ ဆက်ပါအုံး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကာလသာကြိုက် အတွင်းသတင်းများ ဝေမျှစေလိုပါတယ်။ ကြောင်ဆိုတာ အညီအဟောက်ကြိုက်တယ်ဗျ… :cool:
အော် လေးကြောင်ကြီးကလည်း သူရိုက်တဲ့ ကားတိုင်းက ဂျပန်ခေတ်ကြီးပဲလေ
သမိုင်းကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့လည်းရိုက်ကြတယ်ရှင့် ။ ( အထူးသဖြင့် ဖားကား)
ကျန်စစ်မင်းဆိုရင်လည်း ရုပ်ရှင်ထဲ ရောက်မှ မိန်းမတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် လှည့်ပတ်ယူနေ တာ စစ်တောင် မတိုက်အားဘူး… :D
ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါရင်.. ရုံတင်ကားဝေဖန်ရေး. ဒီမှာပဲတင်ပြီး.. ပယ်ပယ်နယ်နယ်…ဝေဖန်ပေးပါလား..။
ဝေတော့ဝေဖန်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ပိုက်ဆံက အနည်းဆုံး ၂၀၀၀ ။ကျော်လောက် ကုန်ကျခံရဦးမယ်။နောက် ထွက်သမျှကားတွေကလည်း စောက်ပေါကားတွေ။ကိုယ့်ချိုင်းကို ကလိ ထိုးတာမှရယ်ရဦးမယ် ။ ဘာဇာတ်လမ်းမှမရှိ…။အထူးသဖြင့် အကြည်တော်ဇာတ်ညျွန်းရေးတဲ့ကား ဆိုပိုဆိုး။ ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ဇတ်ကားအစကတည်း အဆုံးအထိ ရေးလို့ကုန်မှာတောင်မဟုတ်တော့ဘူး။
ပွဲကြမ်းလာပြီ။ စိန်ခင်မောင်ရီကို သွားခေါ်မှ ထင်တယ်။
တော်လှန်ရေး မပြီးသေးပါဘူး ။ ရောဂါ ထတဲ့ အချိန်မျိုးဆို အာသာပြေစေခြင်း အလို့ ငှာ တော်လှန်လေ့ ရှိပါသေးတယ် ။ ယနေ့ ခေတ်ကြီးဟာ ငွေရှာရ အရမ်းခက် လာတယ် လို့ လူတိုင်းနီးပါး လို ပြောနေကြတာ ကို ကြားဖူးကြ မှာပါ ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ဝမ်းတစ်ထွာအတွက် လှုပ်ရှားရုံးကန် နေကြတဲ့ ပြည်သူ တွေ ဟာ အလုပ်ပြီးချိန်မှာဆို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ပင်ပန်းမှု ပြေပျောက်ရာ ၊ စိတ်အပန်းပြေဖို့ ရာ ဖျော်ဖြေမှု မျိုး ကို ရယူလေ့ရှိပါတယ် (အင်တာနက် သုံးခြင်း ၊ စာဖတ်ခြင်း ၊ ကိုရီးယားဇါတ်လမ်းတွဲ ခွေကြည့်ခြင်း ၊ ဗမာကားကြည့်ခြင်း ၊ အစရှိသဖြင့် ) ။ များသောအားဖြင့် ပြည်သူများဟာ “ ရယ်ရသော ဟာသကား ဟာသ ဇါတ်လမ်း များ ” ကို ကြည့်ရူ့ လာကြတာ များပါတယ် ။ သို့ နှင့် မြန်မာ့ဗီဒီယို ရုပ်ရှင်လောက တွင် ဟာသ ကား များ ဖောင်းပွ လာသည် ကို ယနေ့ ထိတိုင် တွေ့ ကြ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟာသကား လို့ ဆိုလာလို့ လည်း ၁၀ ကားကြည့် ရင် ၁၀ ကား ဟာသ မဖြစ်တာ ကို တွေ့ မြင်ကြရမှာပါ ။ ကားတိုင်းလိုလို ဟာ ဇါတ်လမ်း ဇါတ်အိမ် ခိုင်မာမှု မရှိပဲ နာမည်ကြီး မင်းသား မင်းသမီး တို့ ကို ဗဟိုပြု ကာ ဟာသကား လို့ ခေါင်းစဉ်တပ် လုပ်စားနေကြပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေ ကို ဇွတ် ကလိယားထိုး ရယ်ခိုင်းနေပါတယ် ။ တစ်ချို့ ဟာသ ကား တွေ ကြ တော့ လည်း အမေ၊အမ၊ညီမ တွေ နဲ့ အတူ ထိုင် ကြည့်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့ စကားလုံး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းတွေ ကို သုံးနှုံးထားပါတယ် ။ ရုပ်ရှင်ကား ထုတ်လုပ် သူ များ က လည်း ပရိသတ် ကြီး က ဟာသကား ကြည့်ချင် ကြ မှန်း သိတဲ့ အခါ ဇွတ်ကို ဟာသကား ကြပါတော့တယ် ။ ဝမ်းနည်း စရာ တစ်ခု ကောင်းတာ က တစ်ကယ်စာရေးကောင်းတဲ့ ဟာသစာရေးဆရာ တစ်ချို့ ဟာ ဇါတ်ညွှန်းလိုင်း ဘက် ကို လုံးဝ ရောက်သွားတာပါပဲ ။ ပြည်ပ က ဇါတ်လမ်း မှန်သမျှ ကို တုစုပြု ကာ ပြည်တွင်းဖြစ် အသွင်ပြု ကြပါတယ် ။ ရံဖန်ရံခါ ဆို ရင် ပြည်ပ ဇါတ်လမ်း ကို သူ အရင် ထု တာ ကိုယ်အရင် ထု တာ စသည်ဖြင့် အရှက်ကင်းမဲ့စွာ ဖြင့် ပြဿနာ များ ထတက်ကြပါတယ် ။ ( ဥပမာ ဆင်တူ တာလေး တစ်ခု ပြောရရင် ဝါကာဝါကာ သီချင်း ) ။ ဇါတ်လမ်း တစ်ခု ကို ရိုက်ကူးချိန်ဟာ လည်း လွန်စွာ တိုတောင်းလာပါတယ် ။ အဲဒါကို ပဲ ဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ သူတွေ ကလည်း အများကြီးပါပဲ ။ ကြာလာတော့ … ဗမာဇါတ်ကား များ ရဲ့ လုပ်ပေါက် ကို အထာနပ်လာတဲ့ ပြည်သူ များဟာ ကိုရီးယားဇါတ်ကားလိုင်း ၊ အခြား ပြည်ပဇါတ်ကားများ ဘက် ကို ကူးပြောင်းအားပေးကုန်ကြပါတယ် ။ ထိုအခါ ထုတ်လုပ်သူ များ က ဘာပြောသလဲ ဆိုရင် ဒီဇါတ်ကားခွေ တွေ ပေါပေါနဲ့ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ ရတာ လို့မြင်လာကြပါတယ် ။ တစ်ကယ်တန်းကြ သူတို့ ကို လုပ်ကျွေးနေတာ အဲဒီကိုရီးယားတို့ ဘာတို့ ဆိုတာ ကို မေ့ နေကြပါတယ် ။ ( ဒါကတော့ ကျွန်တော့် အမြင်လေး ပေါ့နော် )
တကယ်အကောင်းကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေကရုပ်ရှင်ကို အရင်လို အားပါးတရ ရုံပြည့်ရုံလျှံအောင်
မကြည့်ကြတော့လောက်အောင်ကို မြန်မာရုပ်ရှင် အဆင့်နိမ့်ကျသွားပါတယ။်
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်း ရေးပါအုံးမယ်ဗျာ။
အကိုကြီးတို့ အမကြီးတို့ရယ် .. များတို့က မင်းသားတွေ လှုပ်ရှားမှ နေ့တွက်ကလေးတွေ စီတဲ့
ဖြတ်လျှောက်တွေ .. လူကြမ်းတွေ .. ဧည့်ခံပွဲ တက်ရတဲ့သူတွေပါ ..
ပြည်သူတွေ အားပေးမှ များတို့ စားရသောက်ရမယ့် ဘ၀ပါ ..
၃ ရက်နဲ့ အပြီးရိုက်တော့လဲ များတို့ နောက်တကား မြန်မြန် ကူးရတာပေါ့ ..
များတို့ နေ့တွက်က အများဆုံးရမှ ၃၀၀၀ ပါ .. ခေါ်ရိုက်မယ့်လူ မရှိရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လက်ဖက်ရည်ဖိုး ရှင်းမယ့်လူ ဆက်မျှော်ရဦး မှာ ..
များတို့ တခြားလဲ လုပ်မစားတတ်လို့ပါ ..
အဲသလိုများ ပြောကြရင် အရိုးနားက အသားစလေး ရလိုရငြား စောင့်နေတဲ့လူတွေအတွက်
မင်းသားတွေ ခေါ်ရိုက်မှ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်လာမယ့် လူတွေအတွက်တော့ ၃ ရက် တကားတွေ ရှိနေဦးမှာပါ ..
ပြောတော့သာ ကိုးရီးယား ကားတွေကို သနားတယ် တဲ့ .. ပြောတဲ့လူတွေသာ
ကိုးရီးယား ကားတွေ ခိုးချ .. ဇာတ်လမ်းပိုင်းတွေ ခိုးချ .. သီချင်းတွေ ခိုးချ ..
နောက်ဆုံးတော့လဲ .. သူခိုးကားတွေပဲ ကြည့်နေရဦးမှာပါ
ခုက ကိုရီးယားခေတ်ကိုရောက်လာပြီလေ… ကိုရီးယားကားများ ကော်ပီတွေရိုက်ပြီး မြန်မာ့ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်… ဂုဏ်ထူးဆောင်ပင်… တိုးတက်ဖို့အစဉ် ကြိုးစားစို့လေ…. ကိုရီးယားနိုင်ငံက မင်းသားမင်းသမီးတွေ မြန်မာလာတုန်းကတောင် ပြောသွားသေးတယ်။ မြန်မာလာခါနီးမှာ မြန်မာတွေအကြောင်း လေ့လာဖို့ မြန်မာဇာတ်လမ်းခွေတွေ သူတို့မှာ မရှိပါဘူးတဲ့လေ… ဒီလောက် ကျော်ကြားအောင်မြင်တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ခေတ်ကြီးကိုး…. (ရှေ့လျှောက် မတွေးဝံ့စရာကြီးပါပဲ။ ဘယ်နိုင်ငံတွေက ကားကို ကော်ပီယူရိုက်မလဲဆိုတာ…)
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေတင်လား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်နေတဲ့ ၀တ္ထု လုံးချင်တွေကျတော့ရော….. ။ နိုင်ငံခြားက ဇာတ်ကားတွေ ပုံတူကူးပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတာတွေပဲ…။ အဲဒိလိုမှမဟုတ်ရင်…. ဘာမှအနှစ်သာရမပါတဲ့ ဟာသ တွေနဲ့ပဲ နဗန်းလုံးနေတော့တာ…။ 1985 မတိုင်ခင်က စာပေခောတ် ရုပ်ရှင်ခောတ်ကို ပြန်တမ်းတမိတော့တယ်…။ အဲဒိတုန်းကလည်း ကူးတာတော့ရှိတာပဲ…။ အဆင့်နဲနဲရှိသေးတယ်..။
မြန်မာမင်းသားတွေထဲမှာ အခြောက်မလုပ်ဘူးတဲ့မင်းသား မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဆရာအကြည်တော်ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ မင်းသားကြီး အာနိုးတောင် မြန်မာနိုင်ငံ လာလိုက်တာ အခြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပဲ
ရှေးရှေးတုန်းကဇာတ်ကားကြီးတွေကိုအရမ်းသတိရတယ် … ဘယ်အခါပဲကြည့်ကြည့် မရိုးဘူးဗျာ … အနှစ်လည်းရှိတယ် …. အခုခေတ်မှာတော့ ဒါရိုက်တာတွေထဲမှာ ကုသိုလ်ကိုပဲကြိုက်တယ် … အကြမ်း၊အလွမ်း၊အချစ်၊အမုန်း အားလုံးပါတယ် …. ခေတ်မီဇာတ်ကားတစ်ကားလောက်ကြည့်ချင်တယ် … ဘဏ်ဖောက်တဲ့ကားတို့ သမ္မတလုပ်ကြံဇာတ်ကားမျိုးတွေပေါ့ …
ကျနော့ အယူအဆကတော့ မြန်မာကားတွေ ဟာ မင်းသားမင်းသမီးတွေကို သဘာဝထက် ပိုပြီး တရားလွန် ပံ့ပိုးပေးတာ အင်မတန် အကြည့်ရဆိုးပါတယ်။ ခိုးကူးခွေတွေဟာလည်း သူတို့ကို ဒုက္ခ ပေးတဲ့အချက်တခုပါပဲ။
သမ္မတလုပ်ကြံဇာတ်ကားဆိုရင်တော့ ရိုက်ချင်တဲ့သူရှိရင် ဆင်ဆာပေးမှာလားဟင်….:P
ဘယ်လိုကားတွေကြည့်ချင်လည်းဆိုတော့ ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ ရာဇ၀င်နောက်ခံဝတ္ထုတွေကို လူအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးကြည့်ချင်တယ်… ဆရာကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းခွဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဇာတ်အိမ်ခိုင်မှာပါ…
နောက်ပြီး ဆရာမဂျူးရဲ့ သူမင်းကို ဘယ်တော့မှ… ကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်။ (ရိုက်ပြီးသားရှိရင်လည်း ပြောပါနော်.. အဲဒီဘက်မှာ အားနည်းလို့)
ဒါပေမယ့်လည်း.. ၀တ္ထုကောင်းတွေက ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ရင် ၀တ္ထုဖတ်တာလောက်ကြည့်မကောင်းဘူး… ဘာလို့လည်းမသိဘူး…